कक्षा ११ र १२ का सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई अ’त्यन्तै जरुरी सू’चना ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कक्षा ११ र १२ का सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई अ’त्यन्तै जरुरी सू’चना !
कोभिड-१९ का कारण यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परी’क्षा (एसईई) हुन सकेन भने कक्षा ११ को वाषिर्क परी’क्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिने भएको छ । तर शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा १२ को परी’क्षा स्’थगित गर्न नमिल्ने भएको हुनाले वैकल्पिक माध्यमबाट परी’क्षा लिने तयारी भईरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यो विवरण संकलन भइसकेपछि परी’क्षाको होम सेन्टरबारे पनि निर्णय हुन्छ ।’
भक्तपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको बसभित्र सामूहिक बलात्कार, २ जना पक्राउ